Håkan Larsson /”Ore Properties”: amaphepha angumkokotelo ukuba Migration Board, sihlehliswe F-intela futhi igama elisha inkampani | Holmbygden.se
Posted on 28 Novemba, 2015 ngu Holmbygden.se
Manje silungiselela ngamandla ukuze zithole usathola isikhathi ukuthola ababaleki Stendahls skandalhus. Ngenkathi ekhula scandal kanye semfene Zizoqhubeka umnikazi omusha Håkan Larsson kusukela Orebro, manje ubambisana ejenti Stendahs. Ngemva Ukuphika izixhumanisi uJohan Stendahl kwembulwe Swedish Ithelevishini Izindaba Västernorrland, it kuvela ukungabaza entsha manje eziningana:
izitifiketi Amanga kuthunyelwe izicelo Migration Board.
Nalapha futhi, igama ushintsho ubunikazi.
izinkampani Wehliswe F-intela Håkan Larsson.
Lied ngokuphumula ukuxhumana wendawo labasubathi.
Ngaphandle uhlela imvume / imvume yokwakha ukukhoseliswa yokuhlala.
izicelo nesitifiketi ukuba Migration Board
Håkan Larsson noJohan Stendahl kwezomthetho ummeli uMichael Sterner okufakiwe ukupholisa isitifiketi bamanga izakhiwo Anundgård e amabhidi zabo Migration Board umuntu amukelwe. Izilawuli ukupholisa uvela inkampani ngaphandle F intela kanye ngaphandle kwesikhathi sogunyazo ukuze ihlolwe. Indawo izakhiwo ezithintekayo Ungase futhi ifakazela iyiphi umhloli ayikaze ngisho ezindlini zabo okuyinto kusolakala zihlolwe Izivumelwano.
Michael Sterner kwakunjani Stendahl njengoba futhi 2013 lapho ngisho ke okufakiwe amadokhumenti angelona iqiniso ezakhiweni nomlilo yisivikelo Migration Board. Kwakunjengokungathi Rescue Medelpad ke sobala ngempela ukuthi waqamba amanga.
Nalapha futhi, igama ushintsho ubunikazi – hhayi “Ore Properties”
nje isikhathi sokuba ukuthengwa ukukhoseliswa yokuhlala 2013 inkinobho “Stendahl skandalhus” umnikazi omusha ephepheni “iqashwe” izinkampani – Aros Energy nezimemezelo okungewakho bajwayelene uJohan Stendahl. Ngokufanayo, kwaba wokugcina ebusika lapho omunye bajwayelene Stendahl, Håkan Larsson wathenga impahla. Nokho, Håkan Larsson wathatha kuyilapho Aros Energy nezimemezelo nge uJohan Stendahl omele njengoba umqondisi ematheni.
Nokho, manje uqambe kabusha, kusukela Hakan Larsson Bilkonsult AB Ore Fastigheter AB. Uma isizathu siwukuthi abesifazane Håkan Larsson uxhumo Stendahl ingamboziwe okungacacile.
Wehliswe intela F
Ngemva amanani yomlando credit, izikweletu kanye kungabi nekutiphendvulela manje Skatteverket alethwe e F-intela Håkan Larsson inkampani Aros Energy nezimemezelo. Nakuba lokhu uJohan Stendahl nommeli Michael Sterner, lohleti Board.
Trots le, zonke ukunqatshelwa langaphambilini Immigration Service kanye nokuxhumana ukuze uJohan Stendahl, icala Swedish State ingxenye yesine ka bhiliyoni, uthole Håkan Larsson Bilkonsult kusukela Orebro isayine isivumelwano ne-IsiSwidi Migration Board bese uvula ukukhoseliswa yokuhlala scandal izindlu.
Lied ngokuphumula ukuxhumana wendawo labasubathi
Lapho Håkan Larsson kungaba ukuchaza elisuka Holm, wabhala ukuthi baxhumana ezemidlalo wendawo amakilabhu. Lokhu waphikisa ngu Holm Sportklubb, lapho akekho kwaba uxhumene mayelana nanoma yisiphi yokuhlala ukukhoseliswa. Futhi angizange yiluphi ulwazi okuxhunywana izakhamuzi noma yokwaziswa ihlelwe.
Ngaphandle ukuhlela imvume / imvume yokwakha
It has no imvume yokwakha for ukusebenza ukukhoseliswa yokuhlala e izakhiwo zalo. Ngokuvamile kudingeka imvume yokuhlela noma isakhiwo lokusebenza nganoma ushintsho ukusetshenziswa isakhiwo, okungukuthi, uma uya kusuka kumsebenzi eyodwa kuya kwenye.
Ababaleki Indawo ukuphila ndawonye nabanye abazi ngeke nezidingo Building Imithetho for imisebenzi.